Ogaden News Agency (ONA) – Xulafada Sacuudiga oo La Wareegay Garoonka Al-Xudayda.
Xulafada Sacuudiga oo La Wareegay Garoonka Al-Xudayda.
Xulafada Sacuudiga & Imaaraatiga oo kaashanaya ciidamadan Yemen ayaa shasheegay inay la wareegeen gacan ku heynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeydah oo ay dagaalo xoog leh ka socdaan.
Garoonka diyaaradaha ayaa ku yaal Koonfurta Magaalada Xudeydah oo ay tan iyo Khamiistii ka socdaan dagaalo xoog leh. Xoogaga iskaashanaya ee Yemeniinta iyo Xulafada Sacuudiga ayaa hada ku sugan dhinaca koonfureed ee magaalada Xudeydah, halkaasi oo ay difaac uga jiraan maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo iyagu horey gacanta ugu hayey magaaladaasi xeebta saaran.
Dekadda magaalada Xudeydah ayaa ah tan ugu weyn ee dalkaasi Yemen oo ay kasoo degi jireen gargaarka u socda shacabka Yemen, arrintan oo keentay in xafiiska Qaramada Midoobay (QM) baaq qeylo dhaan ah kasoo saaro dagaalka magaaladaasi ka bilowday oo ay sheegeen inuu saameyn xun ku yeelan doono gargaarka u socda dadka rayidka ah.
Magaalada Xudeydah ee saaran xeebta Koonfur-galbeedka dalka Yemen ayaa ah mid muhiim u ah kooxda Xuuthiyiinta oo hada qarka u saraan in laga go’adoomiyo illaha dhaqaalaha ugu muhiimsan kasoo geli jiray.
Dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa sadexdii sano ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen in ka badan 10kun oo shacab ah, waxaana la sheegay in 8.4 milyan shacabka dalkaasi ay qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan. QM ayaa u aqoonsatay Yemen inuu hada yahay dalka caalamka ugu liita oo ay shacabkiisa dul-hoganayaan halis badan oo ah xasuuq iyo gaajo.